के हो नोवल कोरोना, कसरी बच्‍ने ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ११ माघ २०७६, शनिबार ०९:०५ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । चीनमा देखिएको निमोनिया बनाउन सक्ने नयाँ प्रकारको ‘नोवल कोरोना भाइरस’ संक्रमण नेपालमा समेत देखापरेको छ । चीनको बुहानबाट हालै देश फर्किएका एक नेपाली विद्यार्थीमा उक्त भाइरस देखिएको हो । प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त भाइरस देखिएको हो । अस्पतालबाट स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्किएका उनको स्वास्थ्य स्थिति हाल सामान्य छ ।
जनावर वा जनावरको फोहोर छोएपछि@kantipur
करोडौंको सरकारी जग्गामा भूमाफियाका आँखा
बुटवलरोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा हत्याउन खोजेको पाइएको छ ।
व्यक्तिका नाममा लालपुर्जै बनाएर सरकारी जग्गा किनबेच गर्न खोजेपछि सो…
किन मान्छेलाई झोंक चल्छ ?
काठमाडाैं । मान्छेलाई बेलाबखत झोंक चल्छ । झोंक चलेको बेला विवेक नियन्त्रणमा हुन्न । विवेक नियन्त्रणमा नभएको बेला जे…
जुम्लामा डा. केसी पक्षरधर र प्रहरीबीच झडप, दर्जन घाइते
काठमाडौं। जुम्लामा आमरण अनसन बसेका प्रा डा. गोविन्द केसी समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएको छ । बिहीबार डा. केसीलाई…
फोक्सुन्डो ताल फोहोरले प्रदूषित हुँदै र पुरिंदै
काठमाडौं । भट्ट हेर्दा गाढा निलो देखिन्छ, फोक्सुन्डो तालको पानी । यहाँ आइपुग्ने आगन्तुकलाई स्कुले जीवनमा फाउन्टेन पेनमा भरेको…
काठमाडौँ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकले भरिएको छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय…
डिभी चिट्ठा नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहोस्
काठमाडौं । सन् २०२० को अमेरिकन डाइभर्सिटी भिसा डिभीको नतिजा आज सार्वजनिक हुने भएको छ ।
सन् २०२० मा अमेरिका प्रवेशका…